Taariikhda Dawlada Sucuudiga iyo qaabkii loo Aas-aasay | Horn Cable TV
Posted by Hassan Galaydh Yaa aasaasay dawlada sucuudiga?
Goorma ayaa lagu dhawaaqay magaca Boqortooyo?
Immisa Amiir iyo Boqor ayaa iska dhaxlay nidaamka dawladeed ama Boqor tooyo ee soomaray Sucuudi Arabiya? Maxay se kala ahaayeen magacyadoodu.
Insha Allahu tacaalaa waxa aan halkan aan idinku soo gudbindoonaaa taariikhda reer Aalla Sucuud iyo habkii iyo hanaankii ay u soo mareen yagleelida dawlada Sucuudiga iyo sidii loogu dhawaaqay Boqortooyada Sucuudi Arabiya iyo taariikhda qaar ka mid ah culimadii seeska u dhigay Boqortooyada oo uu ka mid ahaa Sh. Maxamed Cabdiwahaab Alle ha unaxaristee . Waxa kale oo intaa dheer oo aynu ku falaqayn doonaa dagaaladii ba`naa ee u dhexeeyey reer Aalla Sucuud iyo wixii uu
ku qotomey ee udub dhaxaadka u ahaa. Hadaba si taxana ah ayaan wiigiiba laba jeer idinku soo gudbindoonaan si aydun uga faaidaysataan una ogaataan Boqortooyada Sucuudi Arabiy taariikhdeeda dhammaad illaa bilaw iyo waxa ay tahay iyo saamaynta ay caalamka ku leedahay ba
Nasabka iyo Abtirsiinta Reer Aalla Sucuud
Reer Aalla Sucuud waxa ay ku Abtirsadaan qabiilada weyn ee looyaqaano (Cinza) oo ah qabiilooyinka ugu badan carabta oo degan Sucuudiga, Ciraaq iyo Suuriya sidoo kale nasabkoodu waxa uu dib ugu laabtaa (Cadnaan) . Hadaba bilawgii qarnigii 12 naad ee Hijriyada oo ku began qarnigii 18 tobnaad ee miilaadiga waxa la wareegay Imaaradii ( Darciya) Amiir Sucuud binu Maxamed Ibnu maqran kaas oo loo aqoon san yahay inuu ahaa mu-asaska magaca dawlada Sucuudigu ku Abtirsato .
Lasco qaybta 2aad maalinta isniinta ah ee fooda inagu soo haysa Insha Allah